Zimbabwe: Mnangagwa Pushes Extradition of South Africa-Based G40 Members - allAfrica.com
President Mnangagwa announces the extension of the lockdown at State House in Harare.
A few former Zanu PF officials who were part of the once influential G40 faction once involved in intense rivalry with Mnangagwa's faction are based in South Africa.
"The G40 cabal that has been feeding the South African people with wrong information and hostile information about the country and its leadership, will soon be extradited from that country to face the music," Mnangagwa told cheering Zanu PF members.
"These G40 elements peddling these falsehoods, the narratives about Zimbabwe and we know where they are. We have been reluctant, but now we have an extradition treaty between Zimbabwe and South Africa.
"I am now going to give instructions to evoke that treaty. So, we can extradite these elements to face the law in Zimbabwe."
"Local NGOs, I would like to make it clear that each NGO in this country when they get registered, they get registered on the basis of agreed area of participation, they are given a mandate for a particular area of activity," he said.
"But those who are going to be found acting outside their mandate we shall call them to account."